जगन्नाथ पौडेलको प्रचण्डलाई प्रश्न: छोरीले नजिते देश दुर्घटनामा जान्छ भन्या के हो ? « Light Nepal
Published On :7May, 2022 4:04 pm
स्थानीय निर्वाचन आउन साता दिनमात्रै बाँकी छ। देश नै चुनावमय भएको छ। अझ चितवनको भरतपुर गठबन्धन, विद्रोहका कारण चुनावी चर्चामा छ। बिहीबारको चुनावी सभामा प्रधानमन्त्रीसहित गठबन्धनका प्रमुख नेता चितवन आए । उक्त चुनावी सभामा प्रचण्डले रेनुले मेयर नजिते देश दुर्घटनामा जाने र त्यसको जिम्मा चितवन कांग्रेसले लिनुपर्ने बताएपछि तितो प्रतिक्रिया आउन थालेको छ। भरतपुरको मेयरमा कांग्रेसका बागी उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलले प्रचण्डको भाषणलाई कसरी लिनुभयो त? आइएनएसका लागि चितवनबाट प्रतिमा सिलवालले पौडेलसँग गर्नुभएको कुराकानी :